ဆေးတက္ကသိုလ်, မန္တလေး. ဆေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာပြည်ရှိ ဆေးတက္
ⓘ ဆေးတက္ကသိုလ်, မန္တလေး. ဆေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာပြည်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် ၅ ခုအနက် မန္တလေးမြို့တွင်ရှိသော ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ဆေးပညာဘွဲ့ နှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ၊ ..